PCB Layout, PCB Copy, PCB ပြောင်းပြန်
IC ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနည်းပညာသည် ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များနှင့် အပြန်အလှန်မှီခိုနေမည်ဖြစ်သည်။
admin မှ 22-07-02 ရက်နေ့တွင်
အမှန်မှာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ မွေးဖွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအသစ်များ ထွန်းကားလာခြင်းတို့သည် ဝေဖန်ထောက်ပြမှုနည်းပါးပြီး ပိုမိုအားပေးလာပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။အစပိုင်းတွင် IC ကုဒ်ဝှက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လူတိုင်းက မျက်နှာသာမပေးပေ။တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကူးယူခြင်းဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်လိုက်သော်လည်း ...
Flying car ချစ်ပ်စာဝှက်
admin မှ 22-06-28 ရက်နေ့တွင်
ကားများ လေယာဉ်ပျံ သို့မဟုတ် စပိဘုတ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသည့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်အချို့တွင် မြင်ကွင်းအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်သည်။သူတို့က အရမ်းမိုက်တယ်။လက်တွေ့ဘဝတွင် ပျံသန်းနေသောကားသည် ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ ပုံစံများကို လွတ်လပ်စွာပြောင်းနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ပျံသန်းနိုင်သောကားသည် အိပ်မက်မဟုတ်တော့ပါ။ပျံသန်းနိုင်သော ကားတစ်စီးသည် လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့သည်..။
SCM နဲ့ အလွယ်တကူ ကစားနည်းကို သင်ပေးပါ။
SCM သည် အမှန်တကယ်တွင် အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အခြေခံအုတ်မြစ်အနည်းငယ်သည် အလွယ်တကူကစားနိုင်သည်။single-chip ကွန်ပျူတာများကိုကစားရန် ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါအဆင့်များရှိသည်- 1. Pure hardware DIY- ဤကစားနည်းအဆင့်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ISP ဒေါင်းလုဒ်လိုင်းရှိသရွေ့ (မိုဘိုင်းဖုန်း၏သဘောသဘာဝနှင့်ဆင်တူသည်...
မြန်နှုန်းမြင့် မီးရထားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် single chip microcomputer decryption နည်းပညာအသစ်
admin မှ 22-06-21 ရက်နေ့တွင်
ကုမ္ပဏီ၏ နားလည်မှုအရ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများတွင် အဓိကအားဖြင့် စနစ်ပေါင်းစည်းမှု၊ ပြောင်းပေးမှု၊ မော်တာ၊ ထရန်စဖော်မာ၊ ကားကိုယ်ထည်၊ traction ဘရိတ်စနစ်၊ ရထားထိန်းချုပ်မှု၊ ဘိုဂျီစသည်ဖြင့် အဓိကအားဖြင့် နည်းပညာများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရသည့်...
Chip decryption သည် PCB board read ၏ တိုးချဲ့မှုဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး ထွန်းကားရေး၏ ကျောရိုးဖြစ်သည်။တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိဘဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့သည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိရင် ငါတို့နောက်ကျသွားမယ်၊ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု...
ကော်ပီကူးခြင်းသည် သုံးစွဲသူများထံ အဘယ်တန်ဖိုးရှိသနည်း။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် တစ်ချိန်က ထိုသို့သော ယူဆချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်- အကယ်၍ မှတ်စုစာအုပ် ကွန်ပျူတာများကို သုတေသနပြုရန် နှစ်နှစ်ကြာပြီး နိုင်ငံခြားတွင် သုတေသနပြုပြီးနောက် သုတေသနစတင်ရန် နှစ်နှစ်ကြာလျှင်၊ ယင်းနှစ်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားမှတ်စုစာအုပ်များကိုသာ ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုစာအုပ်များထက် လေးနှစ် နောက်ကျနေပေသည်..။
ဆက်သွယ်ရေးစက်များတွင် PCB ဖတ်ရှုခြင်း၏ အရေးပါမှုကို သုတေသနပြုခြင်း။
နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင်သည် ဘဏ္ဍာရေး၊ cloud computing နှင့် big data နှင့် သတင်းအချက်အလက် စနစ် လျှို့ဝှက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု စသည့် နယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသား သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး ပရောဂျက်များကို စုစည်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ဒီလို မကြာခဏ လုံခြုံရေး အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အခွင့်အလမ်း တံခါးကို ဖွင့်ပေးရုံသာမက…
Chip စာဝှက်စနစ်သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆီသို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ သူရဲကောင်းဆန်သော စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်ဖြစ်လာသည်။
ယနေ့တွင်၊ ချစ်ပ်စာဝှက်စနစ်သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းပေါ်ရှိ သူရဲကောင်းဆန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်ဖြစ်လာပြီး အမျိုးသား e-commerce ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသစ်တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။၎င်းသည် နိုင်ငံခြားအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များ၏ ဆားကစ်ဘုတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုကို လုံး၀ ကူးယူနိုင်သည့် ပြောင်းပြန်သုတေသနနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
chip microcomputer တစ်ခုတည်းအတွက် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အတိုင်းအတာ
admin မှ 22-06-06 ရက်နေ့
single-chip microcomputer ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးစွာဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေပြီး single-chip microcomputer ၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနည်းပညာကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။အနှောင့်အယှက် အရင်းအမြစ်များသည် အဓိကအားဖြင့် အတွင်းပိုင်း (ပြင်ပ) ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ လာပြီး pr...
Shenzhen sichi နည်းပညာ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၏ အဓိက ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်များတွင် စက်မှု၊ စားသုံးသူ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ကွန်ပျူတာ အစွန်အဖျားများ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ဥပမာ- ultrasonic ဆေးထိုးဘုတ်၊ သမုဒ္ဒရာ ရှာဖွေရေး ဆေးထိုးဘုတ်၊ ဓာတ်လှေကား မားသားဘုတ်၊ ရထားမားသားဘုတ်၊ ကွန်ပျူတာ မီတာ...
ဆားကစ်ဘုတ်ကူးခြင်း၏ နောက်ပြန်သုတေသနနည်းပညာသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာသည်။
Circuit board ကူးယူခြင်း၏ နောက်ပြန်သုတေသနနည်းပညာသည် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီး PCB board copying ၏ နောက်ပြန်သုတေသနနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အချို့သော PCB board copying ထုတ်ကုန်များသည် အချိန်တိုအတွင်း တီထွင်နိုင်ကာ အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ဒီကနေတဆင့်...
PCB ကူးယူခြင်းနည်းပညာသည် ပြည်တွင်းစက်ရုပ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဖြစ် မြှင့်တင်ပေးသည်။
PCB ကူးယူခြင်းနည်းပညာသည် ပြည်တွင်းစက်ရုပ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဖြစ် မြှင့်တင်ပေးသည်။Sitch နည်းပညာပြောင်းပြန် R&D စင်တာမှ ပြောကြားရာတွင် လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စက်ရုပ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် နို့စို့အရွယ်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။PCB ကူးယူခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရန်အတွက် Reverse R&D နည်းပညာကို ကျွန်ုပ်တို့ ချေးယူရပါမည်...
LCD IC Burn ယူနစ်၊ ပရိုဂရမ်မာ
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020- All Rights Reserved.
Msp430 Mcu Crack လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။, Pcba Cloning Uk, [Ic Reverse Engineering], Icl7107 Voltmeter Pcb Layout, Fpga Pcb အပြင်အဆင်, Pcb ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်,